တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သစ်ဆွေးတုံးလေး ပုံပြင် …
Posted by မေဓာဝီ at 3:54 AM
အဟင့်...ဘာရေးရမှန်းတောင် သိဘူး...ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ...
6/23/2007 4:12 AM
6/23/2007 5:58 AM
Thanks for this story , mamay. After reading it, I am thinking , thinking, thinking . And I don't know what I feel and how I feel. I think I know my feeling but I don't know how to express it.
If I were that tree-trunk, I will hit that guy's head.:P
I am not smart enough to give comment on this story. But I think, it's just like Post-Moderism , it makes me thinking, thinking and thinking.
now I am still thinking, Ma May.
thinking for long time, but ...no words come out.
eek...You make me to shut my mouth up and now I am sitting quietly and thinking.
၀မ်းနည်းစရာ ဇာတ်လမ်းလေးပဲ မမေ.. ။
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ သူများလိုတော့ တွေတွေဝေေ၀ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘယ်နားမှာအဲဒိ အမြူတေ ကျန်ခဲ့သလဲဆိုတာပဲ သိချင်တယ်။ အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် သွားပြန်ယူမလို့ ။ ဟီးး)
လူတွေဟာ ပုံပြင်တခု၊ ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်လမ်း တခုခုကို ဖတ်ရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲဒီ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင် နေရာမှာ ၀င်ခံစားကြည့်လေ့ ရှိတယ်တဲ့။ ကျနော်လဲ ၀င်ခံစားကြည့်တာပေါ့။ အခု ပုံပြင်မှာ ကျနော်က သေချာတယ်။ သစ်ခြောက်တုံး မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို လူရွယ်များ ဖြစ်နေမလား…။ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကျနော် မုန်တိုင်း အတိုက်ခံရဖူးတယ်။ ဟုတ်တယ်…။ စကားလုံး မုန်တိုင်းတွေ၊ ကျနော့်ကို အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါဆို ကျနော် အဲဒီဇာတ်ကောင်နေရာကို ဆက်ခံစားလို့ရပြီ။ သစ်တုံးလေး။ အဲဒီ သစ်တုံးလေးနဲ့ တူတဲ့ အားပေးမှုတွေ၊ ဖေးမမှုတွေကြောင့် ကျနော် အားပြန်တက်ခဲ့ရတယ်။ အခု ကျနော်က အဲဒါတွေကို လစ်လျူရှုလိုက်ပြီလား လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်း ပြန်ထုတ်နေတယ်။ မဟုတ်ဘူးးးးး လို့လဲ အထပ်ထပ် ငြင်းနေမိတယ်။ မမေက ရေးတတ်လွန်းပါတယ်။ ကျနော် ဒီပုံပြင်ထဲမှာ နစ်မျောသွားခဲ့တာတော့ သေချာတယ်။
6/25/2007 2:24 AM
hinn phat ya dar yin htay hmar ta myo gyi phite twarr tal ma ma may.
story ka taw taw lay kg par tal:)
sin chin sa yar twe lal par tal,ta yarr ya sa yar twe lal par tal.....
7/12/2007 6:08 AM
အမှန်တော့ ဒီတစ်ပုဒ်ကို ပထမတစ်ကြောင်းကြည့်ပြီး ကျန်တဲ့ တခြား အပုဒ်တွေ ဆက်ဖတ်မလို့ပဲ၊ (အကြွေး တွေကလည်း များနေတော့...)၊
သတိပြန်ရတော့ တစ်ပုဒ်လုံး ဆုံးနေခဲ့ပြီ၊ တတုံးလုံး မီးလောင်ပြီးတော့ ဘာများ ဆက်ဖြစ်ဦးမှာလဲလို့ တွေးနေရင်း အဆုံးသတ်လိုက်တာလေး လှတယ်၊ မမေဓာဝီ ရေးတော့လည်း စိတ်မကောင်းစရာ ပုံပြင်လေး တောင် နုနုရွရွလေး...။